#FreeRod (Fanafahana An’i Rodrigo): Fandresena Mialoha Tamin’ilay Raharaha Fakàn-Tahaka Maneso Tamin’ny Twitter · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2013 3:31 GMT
Nitatitra momba ilay mpisera Twitter Shiliana Rodrigo Ferrari, izay manana raharaham-pitsarana noho ny fampiasana kaonty Twitter maka-tahaka maneso ilay milionera Andrónico Luksic ny Global Voices Advocacy tamin'ny volana Marsa. Manam-baovao tsara momba izany raharaha izany izahay: nolavin'ny Fitsarana ao Santiago, renivohi-pirenena ny fitoriana natao azy, mbola tsy fanapahan-kevitra farany anefa izany ka mety mbola hodinihan'ny Fitsarana Ambony.
Sary avy amin'i Rhinman. (CC By 2.0)
Amin'izany fandresena bitika amin'ny fahalalaham-pitenenana ao Shilia izany, izay hotontosaina atsy ho atsy ny fifidianana filoham-pirenena, nilaza ny fitsarana fa tsy ahitana porofo “hosoka anarana”, araka ny fitorian'i Luksis ny fanenjehana azy.
Nanoro hevitra ny fiarovana ny Fikambanana tsy miankina Shiliana Derechos Digitales [Zo nomerika]. Hoy ny talen'ny Derechos Digitales, nanambara i Claudio Ruiz nilaza:
Fandrahonana mivantana ny fahalalaham-pitenenana ny ao Shilia ny fiampangana azy, raha oharina amin'ny fijery mitongilana ataon'ny biraon'ny mpampanoa lalàna raha ny tombotsoan'ireo olom-pirenena manana fahefana no voatohintohina. Ny tena demokrasia no iray anisan'ny miantoka ny zo sy ny fiarovana ny olom-pirenena rehetra, indrindra amin'ny raharaha tahaka intony. Amin'izany, ankasitrahanay ny fanapahan-kevitry ny fitsarana.
Fambara tsara ity fanapahan-kevitra avy amin'ny fitsarana ity, indrindra fa hotontosaina atsy ho atsy ny fifidianana filoham-pirenena, fotoana hahafahan'ny olom-pirenena Shiliana haneho hevitra ao amin'ny tambajotra sosialy.